Iinkqubo ezi-8 ezilungileyo zokuswayipha kwi-PC, i-Emulator.online ▷ 🥇
Isoftware yesilayidi ebalaseleyo kwiPC
Nabani na ofuna umenzi wesilayidi unokukhetha inani, nokuba ukhuphele kwikhompyuter okanye asebenzise i-intanethi kwisikhangeli. Kukho izixhobo ezikuvumela ukuba wenze inkcazo ngombhalo, umculo, iifoto kunye nevidiyo. Uninzi lwazo, akukho mfuneko yokuba namava kwizicelo zolu hlobo ukuze zihombise. Phuma!
I-Prezi inokuba lukhetho olufanelekileyo kwabo bafuna ukwenza imiboniso enamandla. Izilayidi zenza iintshukumo ezintle kunye nokusondeza ukujonga ngokuthe ngqo kwizinto ezibalulekileyo. Kukho iindlela ezininzi zeetemplate esele zilungile ezinokuhlengahlengiswa ngokupheleleyo, apho ungafaka khona imizobo, iividiyo zeYouTube kunye neefoto.
Isicwangciso sasimahla (esiSiseko) sikuvumela ukuba uqwalasele ukuya kwiiprojekthi ezi-5, ezibonakalayo kwabanye abasebenzisi benkonzo. Unokumema abanye abantu ukuba bahlele umsebenzi wakho kwi-intanethi.
Prezi (simahla, kunye neenketho zesicwangciso sokuhlawula): IWebhu
IPowerPoint yenye yoovulindlela xa kuziwa kwimiboniso yesilayidi. Inkqubo ibonelela ngeetemplate ezininzi kunye notshintsho olwenziwe ngokwesiko kunye neziphumo zoopopayi. Kuyenzeka ukuba ufake iividiyo, iifoto, umculo, iigrafiki, iitafile, phakathi kwezinye izinto.
Umsebenzisi unokuthembela kwimisebenzi yokurekhoda kwesikrini kwintetho, kubandakanya neengxelo. Kanye nokuthatha amanqaku abonakalayo kuphela kwabo bonisayo. Isoftware ihlala inomdla kakhulu kwabo sele bezisebenzisa ezinye izicelo kwiOfisi Suite.
PowerPoint (kuhlawulwe): Windows | IMacOS
I-PowerPoint kwi-intanethi (simahla, kunye nenketho yesicwangciso esihlawulelweyo): Web
Umboniso weZoho sisicelo esifana kakhulu nePowerPoint, kunye nethuba lokuba simahla. Inkonzo iyahambelana nokusetyenziswa kweMicrosoft, ukukwazi ukuvula nokugcina umxholo kwi-pptx. Kwi-Intanethi, ikuvumela ukuba uhlele kunye nabantu abayi-5 ngaphandle kokuhlawula.
Uhlelo lokusebenza lubonelela ngeetemplate zesilayidi kunye nemixholo, enokuxutywa ngokulula. Kuyenzeka ukuba ufake iifoto, ii-GIF kunye neevidiyo (kwiPC okanye kwiYouTube) kwaye ubandakanye amakhonkco kwiTwitter nakwezinye iisayithi, ezinje ngeSoundCloud. Kukho nezixhobo zempembelelo zotshintsho kunye nokuhlelwa kwemifanekiso.
Umboniso weZoho (yasimahla, njengenketho kwizicwangciso ezihlawulelweyo): Web
4. Iintetho zikaGoogle
Izilayidi zikaGoogle (okanye iZilayidi zikaGoogle) yinxalenye yephakheji yeDrayivu. Ngonxibelelwano olulula lokusebenzisa, inika ukhetho lomxholo kwicala lasekunene lesikrini. Imisebenzi yokuhlela itemplate ibonisiwe kwibar yesixhobo.
Iprojekthi inokuqhutywa ngabantu abaliqela ngaxeshanye, kuphela ukuba umyili wazisa ikhonkco okanye izimemo. Isicelo sikuvumela ukuba ufake ifoto, isandi, itafile, igrafu, idayagramu, iividiyo zeYouTube, njl. Iziphumo zinokujongwa kwi-Intanethi okanye zigcinwe nge-pptx, PDF, JPEG, phakathi kwezinye iifomathi.
Imiboniso kaGoogle (simahla, kunye nokuzikhethela kwizicwangciso ezihlawulelweyo): Web
5. Inkomfa ebalulekileyo
Inkqubo yesiNtu yokubonisa izixhobo zeApple, uKeynote uneetemplate ezininzi ezilungiselelwe abo bangafuni kuchitha ixesha. Kukho uninzi lweziphumo zotshintsho. Ungagqamisa isicatshulwa ngezithunzi kunye nokuzoba kwaye uzobe umkhondo wezinto, ezinje ngeemilo kunye nemifanekiso.
Umsebenzisi unokufaka iifoto, iividiyo, umculo, phakathi kwezinye izinto. Ukuba ukudityaniswa kwe-iCloud kunikwe amandla, kunokwenzeka ukuhlela nabanye abantu, nokuba basebenzisa iiWindows. Isicelo sinokufunda iiprojekthi ze-pptx kwaye sizigcine kwifomathi yesoftware yeMicrosoft.
EziPhambili (simahla): ii-macOS
Ngokwenyani lukhetho lokwenza izilayidi ezintle ngaphandle kokwazi usetyenziso lwentetho. Iziko lewebhu libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zetemplate. Kukho iindlela zokukhetha izilayidi ezinoluhlu olubonisiweyo, imifanekiso okanye amabinzana, ixesha elifanelekileyo kunye nokunye.
Sebenzisa ezi uzifunayo uze uzilahle ezinye. Ungahlela nganye kwaye ufake iifoto, ii-GIF, iividiyo kunye nee-audios, kunye nemizobo esebenzayo. Inye kuphela into yokuba ingxelo yasimahla iyafumaneka kwabanye abasebenzisi benkonzo.
Ngokufanelekileyo (simahla, kunye nokuzikhethela kwizicwangciso ezihlawulelweyo): Web
7. UMenzi weSilayidi weSilayidi
Icecream Slideshow Maker lolunye ukhetho kwabo bakhetha ukukhuphela inkqubo kwiPC kwaye basebenze ngaphandle kweintanethi. Isicelo senzelwe ukwenza imiboniso yeefoto ngomculo.
Kodwa kunokwenzeka ukufaka umxholo wokubhaliweyo kwaye usebenzise iaudiyo eyahlukileyo kwisilayidi ngasinye okanye kwingoma efanayo kuyo yonke iprojekthi. Inguqulelo yasimahla ikuvumela ukuba ugcine isiphumo kwiWebm kuphela kwaye unikezela umda weefoto ezili-10 ngentetho nganye.
Umenzi wesilayidi somkhenkce (yasimahla ngezixhobo ezinqongopheleyo): Windows
8. I-Adobe Spark
I-Adobe Spark ngumhleli okwi-Intanethi obonelela ngesixhobo sokubonisa esinomdla. Ukongeza kwimixholo yemixholo, kukwakho okucofwayo kuyilo lwesilayidi kwicala lasekunene lesikrini. Kuyenzeka ukuba ufake ifoto, ividiyo, isicatshulwa, umculo kunye nokurekhoda ilizwi lakho.
Ubude bomfanekiso ngamnye bunokutshintshwa ngokulula, kwikona esezantsi ekunene. Ukuba ufuna ukwenza izandla ezininzi, unokwabelana ngekhonkco okanye umeme nabani na omfunayo. Umxholo unokujongwa kwi-intanethi okanye ukhutshelwe kwifomathi yevidiyo (MP4). Inguqulelo yasimahla ibandakanya ilogo yeAdobe Spark.
Adobe Spark (simahla, kodwa uhlawule izicwangciso): Web
Iingcebiso zokwenza isilayidi esifanelekileyo
Ezi ngcebiso zilandelayo zivela kuAaron Weyenberg, iNkokeli ye-UX yeTED, iprojekthi yenkomfa emfutshane, enemixholo emininzi. Umxholo uyafumaneka ngokupheleleyo kwi-TEDBlog uqobo. Jonga ezinye zazo.
1. Cinga ngabaphulaphuli
Sukucinga ngezilayidi njengesixhobo sesichasiselo sokuseka inkcazo-ntetho yakho. Kufuneka zenziwe eluntwini, kuthathelwa ingqalelo ukuhanjiswa kwamava okubonakalayo awongeza koku sele kuthethiwe.
Kuphephe ukufaka umbhalo omninzi. Ngokuka-Weyenberg, oku kwahlula ingqalelo yabaphulaphuli, abangaziyo nokuba bafunde okubhaliweyo okanye bamamele oko kuthethwayo. Ukuba akukho ndlela yimbi, hambisa umxholo kwizihloko kwaye ubabonise nganye nganye.
2. Gcina umgangatho wokubonwayo
Zama ukugcina iithowuni zombala, iindidi zefonti, imifanekiso, kunye notshintsho kulo lonke unikezelo.
3. Sukuzibaxa iziphumo
Ayisebenzisi utshintsho. Kwingcali, ukhetho olunomdla ngakumbi lunika umbono wokuba intetho yabo iya kukruqula kwaye kuphela ezo ziphumo zibaxekileyo ziya kuphakamisa abaphulaphuli kuxinzelelo lwabo.
Bonisa ukusetyenziswa kwezi zixhobo ngendlela ephakathi kwaye kukhethwa kuphela ezo zinobuqhophololo ngakumbi.
4. Sukusebenzisa ukudlala ngokuzenzekelayo kwiividiyo
Ezinye iinkqubo zokubonisa zikuvumela ukuba udlale iividiyo nje ukuba kuvuleke isilayidi. U-Weyenberg ucacisa ukuba amaxesha amaninzi kuthatha ixesha elide ukuba ifayile iqale ukudlala kwaye umbonisi ucofe ipini ixesha elinye ukuzama nokuqala.
Isiphumo: isilayidi esilandelayo siphela ukubonisa kungekudala. Ukuthintela ezi ntlobo zezithintelo, olona khetho lufanelekileyo ayikokukhetha i ukuzivelisa ngokwakho.
Izicelo zasimahla zokwenza iividiyo ezineefoto kunye nomculo kwiselfowuni yakho
Uyenza njani ibhena kwiPowerPoint ngaphandle kokwazi ukuhlela
Abahleli bokubhaliweyo abakhululekileyo nabasimahla abakwi-Intanethi